Antohomadinika : Vehivavy iray tra-tehaka nibizina “héroïne” - Midi Madagasikara
DomicileFaits-DiversAntohomadinika : Vehivavy iray tra-tehaka nibizina “héroïne”
Antohomadinika : Vehivavy iray tra-tehaka nibizina “héroïne”
Dia mbola eny Antohomadinika hatrany ! Vehivavy iray indray no tra-tehaky ny polisin’ny « stup » teo am-mpibizinana « héroïne » amin’ny fonosana kely, ny talata lasa teo. Voalazany fa efa misy mpanatitra ramatoa ary raisiny amin’ny vidiny dimy alina ariary ny iray grama amin’izany.
Iny iray grama iny indray no zarazarainy anaty fonosana kely, mahatratra eo amin’ny 25 isa eo, ilay antsoina hoe « cocotte », izay « dose » mety ho indray mitsindrona, dia lafony amin’ny vidiny efatra arivo ariary. Tsy atao mahagaga, raha amin’izany vidiny izany no maro ireo olona no voasarika ary amin’ny saranga sy farim-piainana rehetra.
Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny pôlisim-pirenena, izay misahana ny ady amin’ny zava-mahadomelina moa (stupéfiant) etsy Anosy dia fantatra manamafy ny hetsika hatrany izy ireo ary manova paikady isan’andro, entina hanjonoana ireo mpibizina sy mpanaparitaka itony rongony mahery vaika itony. Voatonotonona matetika foana teo iny faritra Antohomadinika iny, ka nisy mihitsy ny fidinana sy fisavàna ireo elakelan-trano rehetra, ataon’ireo pôlisy tsy manao fanamaniana. Ny talata folakandro teo, tokatrano iray izay fantatry ny rehetra fa misy mpanaparitaka heroine no nidiran’ireo mpitandro filaminana. Teo am-pandanjana ireo fonosana « cocotte » mihitsy ity ramatoa ity no tra-tehaka. Mbola tratra teny aminy ny fonosana 11 isa. Tsy nisy alaharo alaharo moa fa dia nentina avy hatrany niaraka tamin’ny fitaovany sy ireo rongony, ho atao porofo, ity vehivavy ity. Navantana any amin’ny biraon’ny pôlisy ary notazomina natao andrimaso. Omaly no fantatra fa natolotra teny anivon’ny Fampanoavana izy.